Phuket VIP Mercury Hofisi - Dhizaini magazini
Hofisi Kubva pamusoro wekuvhurika uye rudzi rwekutsvagisa nzvimbo, kuongorora dhizaini uye kugadzira iwo maficha akabatanidzwa ekuona kwekuwedzera uye chinyorwa chechinyorwa pamwe nepasi sechinhu chikuru chekugadzira chinhu. Urongwa hwakagadzirisa matambudziko matatu anotevera nemafungiro matsva ekuona: Kurera kwenzvimbo pachena uye mabasa; Kukamura uye kusanganisa kwenzvimbo dzinoshanda dzenzvimbo; Iko kuchinjika uye shanduko yeiyo yakakosha nzvimbo yezvipenga.
Zita rechirongwa : Phuket VIP Mercury, Vagadziri zita : Songhuan Wu, Izita remutengi : N-HD design.
Hofisi Songhuan Wu Phuket VIP Mercury